ပန်းပွင့်ခြောက်စက် - Twesix
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ပန်းပွင့်ခြောက်စက်.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Twesix.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Twesix.
Twesix ၏ဒီဇိုင်းသည်ရူပဗေဒနှင့်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာဗဟုသုတရှိသည်။ Electrolyte Solution Solution, Electrolyte Solutional Solution of Plasma ရူပဗေဒဆိုင်ရာရူပဗေဒဆိုင်ရာရူပဗေဒဆိုင်ရာရူပဗေဒဆိုင်ရာရူပဗေဒဆိုင်ရာရူပဗေဒဆိုင်ရာဗဟုသုတကို အသုံးပြု. ၎င်းကိုဖန်တီးသည်။.
စက်မှုလုပ်ငန်း Honeysuckle ပန်းပွင့် Dehydrator Machine DPPG150s-x Tsix
ပန်းပွင့်များအတွက် Tsix ရေခဲသေတ္တာ dehydrator ဟုခေါ်သောအပူစုပ်စက်ခြောက်စက်များဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်လေကို 25 မှ 70 ဒီဂရီအထိခြောက်သွေ့နိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုခြောက်သွေ့စေသောကိရိယာတစ်ခုလုံးကိုခြောက်သွေ့စေရန်, ခြောက်သွေ့သောရေနံတူးဖော်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။ dehumdifying funtions ။ ယနေ့ခေတ်တွင်စက်ရုံများစွာသည်အပူစုပ်စက်ခြောက်စက်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီအတွက်ပန်းများခြောက်သွေ့စေရန်အပူစုပ်စက်ခြောက်စက်ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။တာရှည်ခံ: Twsix ပန်းပွင့်ခန်း dehydrolator ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ Twsix ပန်းပွင့် Dehydrator သည်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏တင်းကျပ်မှုအားလုံးကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အတွက်ပြုလုပ်နိုင်သည့်တာရှည်ခံပစ္စည်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည် - ကျွန်ုပ်တို့၏ Twsix Industrial Honeysuckle ပန်းပွင့်ခန်းသည်သင်အကြိုက်ဆုံးပန်းပွင့်များကိုခြောက်သွေ့စေရန်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကြီးမားစွာဖြင့်ဤခန်းမသည်အိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ Twsix Industrial Honeysuckle ပန်းပွင့်ခန်းခြောက်သွေ့ခြင်း, အရွက်များ, သစ်သီးများ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ပျိုးပင်များ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ပျိုးပင်များ, မှိုများ, ငါး,
dehumidifier dphg080s-x Tsix ဖြင့်ခြောက်သွေ့သောပန်းများကိုအေးခဲစေပါ
Tsix ပန်းပွင့်ခန်းခြောက်စက်ကိုအနိမ့်ပိုင်းနှင့်အလယ်အပူချိန်တွင်ခြောက်သွေ့သောပန်းများကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ရေနံ, ဆီ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, လက်ဖက်စ်စသည်တို့ကိုအခြောက်လှန်းသောပန်းများအဖြစ်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်အပူချိန်နိမ့်ကျရမည်။ ထို့အပြင်အစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းသည် dehumdidifier လိုအပ်သည်။ Tsix ပန်းပွင့်ခန်းခြောက်သုခံရမှုသည်ခြောက်သွေ့သောပန်းများနှင့်သင့်လျော်သောအအေး, အပူပေးစက်, အပူပိုင်းစက်နှင့် dehumdifier တို့ဖြင့်ဖြစ်သည်။နိမ့်သောအပူချိန် - စက်သည်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ပန်းများကိုအေးခဲစေနိုင်သည်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - Twsix ခြောက်သွေ့သောပန်းပွင့်စက်စက်သည်လန်းဆန်းသောပန်းများမှအစိုဓာတ်အားလုံးကိုအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သောတော်လှန်ရေးသမားစက်ဖြစ်သည်။Twsix ခြောက်သွေ့သောပန်းပွင့်စက်သည်သင်၏ပန်းများအတွက်ကောင်းသောအပူချိန်ခြောက်စက်များဖြစ်သည်။ ဤစက်သည်နိမ့်ကျသောအပူချိန်တွင်အတုပန်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ၎င်းသည်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ Twsix ခြောက်သွေ့သောပန်းပွင့်စက်သည်အလိုအလျောက်ပန်းပွင့်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်မျိုးဆက်သစ်စက်ဖြစ်သည်။
DPHG080s-x ကို DPHG080s-x
စီးပွားဖြစ်ငါးခြောက်စက်ရိုးရာခြောက်သွေ့သောငါးများသည်မကြာခဏ 5-7days သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြာသည်။လေထုအရင်းအမြစ်အပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်သည်ခြောက်သွေ့သောအချိန်ကိုတိုစေပြီးခြောက်သွေ့သောငါးအရည်အသွေးကိုအာမခံနိုင်သည့်ခြောက်သွေ့သောငါးများသို့လည်းသင့်တော်သောအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
လက္ကား 1000 ကီလိုဂရမ်အသားခြောက်သွေ့စက် Jacky Dehydrator Shory DPHG150s-G withgroprice-g
စက်မှုအသားခြောက်စက်အမဲသားအမဲသားလူရှုပ်ခြောက်စက်။အသားခြောက်စက်သည်အမဲသား, ဝက်သား, ကြက်သား, Mutton, မြင်းအသားခြောက်သွေ့နိုင်သည်။အသားခြောက်သွေ့သောကိရိယာများသည်မွန်ဂိုလီးယား, ရုရှား, ကာဇက်စတန်, ကာဂျစ္စတန်,Twesix လက္ကား 1000 ကီလိုဂရမ်အသားခြောက်သွေ့စက် Meef JushG150S-G WithGrogrice-G Nightprice-G Notpgrice-G ပေါင်းစပ်
အစားအစာခြောက်သွေ့စက်စီမံကိန်းသည်မွန်ဂိုလီးယားတွင်ရှိပြီးဆောင်းရာသီတွင်အသုံးပြုသည်။ အခြောက်ခံစက်ကိုအဓိကအားဖြင့်ခေါက်ဆွဲနှင့်အသားခြောက်သွေ့ရန်အသုံးပြုသည်။ စက်ကို အသုံးပြု. ဖောက်သည်များသည်4င်းတို့၏ခြောက်သွေ့သောခေါက်ဆွဲနှင့်တစ်နေ့ 1500 ကီလိုဂရမ်အသားခြောက်သွေ့နိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့သောစက်ဟောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်တစ်ကြိမ် output ကိုတိုးပွားစေပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားတစ်ဝက်ကိုလည်းသက်သာစေသည်။
အရည်အသွေးမြင့်မားသော Twesix Hot Air Sausage Drying Machine -Dphg150s-Gလက်တံ - 佛山市顺德区六盛电气设备有限责任公司
Twesix Hot Air Sausage Dryer ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဓိကအားဖြင့်အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲထားသည်။1. အစဉ်အမြဲမြန်နှုန်းမှာဝက်အူချောင်းခြောက်သွေ့တဲ့အဆင့်။5 နာရီမှ6နာရီကြာပါသည်။ ပစ္စည်းများကိုခြောက်သွေ့သောအခန်းထဲသို့တင်ပြီးနှစ်နာရီအကြာတွင်အပူချိန်သည် 60 မှ 65 ဒီဂရီအထိအလျင်အမြန်တက်လာသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုအဓိကအားဖြင့်အသားအရောင်နှင့်အရသာကိုထိန်းချုပ်ရန်ကစော်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဒါကနွေးထွေးတဲ့အဆင့်လို့ခေါ်တယ်။ ပူနွေးသောအချိန်ပြီးနောက်အပူချိန် 45 မှ 50 ဒီဂရီအထိချိန်ညှိပြီး 50% မှ 55% အထိစိုထိုင်းဆကိုထိန်းချုပ်ပါ။2. ဝက်အူချောင်းခြောက်သွေ့ခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောအဆင့်တွင်နှေးကွေးစွာဖြင့်။အရောင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကာလနှင့်ကျုံ့ချိန်ညှိကာလကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ အပူချိန်ကို 52 မှ 54 ဒီဂရီတွင်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ စိုထိုင်းဆကို 45% ခန့်ထိန်းချုပ်ထားပြီးအချိန်သည်3နာရီမှ4နာရီအထိဖြစ်သည်။ ဝက်အူချောင်းသည်အနီရောင်အလင်းမှတောက်ပသောအနီရောင်သို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားပြီးဖြစ်စဉ်သည်ကျုံ့သွားသည်။ ပူပြင်းလှောင်အိမ်များ၏အသွင်အပြင်ကိုဂရုပြုပါ, အပူနှင့်အအေးနှင့်တပြိုင်နက်တနည်းငယ်လာနိုင်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာကောင်းမွန်သည်။3. ဝက်အူချောင်းခြောက်သွေ့မှု၏အမြန်ခြောက်သွေ့သောအဆင့်ဤအဆင့်တွင်အဓိကတင်းကျပ်သောအချက်မှာအပူချိန်ဖြစ်သည်။ ခြောက်သွေ့သောအရှိန်ကိုအားဖြည့်ရန်အပူချိန်ကို 60 မှ 62 ဒီဂရီအထိတိုးမြှင့်ရမည်။ ခြောက်သွေ့သောအချိန်သည် 10 နာရီမှ 12 နာရီအထိထိန်းချုပ်ထားပြီးစိုထိုင်းဆကို 38% တွင်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဝက်အူချောင်း၏နောက်ဆုံးခြောက်သွေ့မှုတွင်စိုထိုင်းဆကို 17% အောက်တွင်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ခြောက်သွေ့သောဝက်အူချောင်းများကိုခြောက်သွေ့သောဝက်အူချောင်းများကိုအစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားပေးသည်, သို့သော်မူရင်းအရောင်, အမွှေးအကြိုင်, အရသာ, ပုံသဏ္ and ာန်များကိုလည်းအသွင်အပြင်ရှိသည့်အရာ, ဘဝ။ မှိုသို့မဟုတ်အချဉ်မပါဘူး။ဝက်အူချောင်းခြောက်သွေ့မှုအရည်အသွေးသည်ဝက်အူချောင်း၏ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ၎င်းသည်ဝက်အူချောင်း၏ခြောက်သွေ့သောနည်းပညာပေါ်မူတည်သည်။ ဝက်အူချောင်း၏ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ရေကိုဖယ်ရှားရုံသာမကဝက်အူချောင်း၏အရောင်, အရသာ, ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အခြားအာရုံခံညွှန်းကိန်းများကိုလည်းသက်ရောက်စေသည်။ Twesix ဝက်အူဇာခြောက်စက်များသည်ဝက်အူချောင်းများကိုခြောက်သွေ့စေရန်အသုံးပြုသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးကောင်းသည်။ ခြောက်သွေ့သောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည်ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်ခြင်း,
192 trays-dphg080s-g လက်ကမ်းစာစောင်နှင့်အတူအသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြောက်စက်စက်
ခြောက်သွေ့သောအခန်းနှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြောက်စက်စက် .Dehydrating Ginger ။ ခြောက်သွေ့သော leek ။ ကြက်သွန်ဖြူခန်းခြောက်။ ရေခန်းခြောက်သောကြက်သွန်နီ။ ရေခန်းခြောက်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်။1. ဤစက်သည်အခြောက်ခြောက်ခြောက်သွေ့မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အပူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းရွှေ့ပြီးခြောက်သွေ့သောအမြန်နှုန်းသည်မြန်ဆန်သည်။2. စက်ရှိအလုပ်ပြည်နယ်သည်အဆိုးဝါးဆုံးသောဖိအားပေးမှုအခြေအနေတွင်ခြောက်သွေ့နေစဉ်အတွင်းဖုန်မှုန့်ပျံသန်းမှုမရှိပါ။3. အိတ်စစ်သည်အိတ်ပေါင်းစုံအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး stati-static anti-static ပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည်လုံခြုံသည်။4. အသေသတ်ခြင်းမရှိ, သန့်ရှင်းရေးလွယ်ကူသော။ GMP ၏လိုအပ်ချက်များကိုအတည်ပြုသည်။Twesix Howedial 500 ကီလိုဂရမ်အသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြောက်စက်စက်သည် 192 trays-dphg080s-Gလက်ဂိုးနှင့် Follale-Foshan Shunde Twesix Energy Compresse Twesix Energy Compressor နှင့် Schneland Energys နှင့် Schneland Energy နှင့် Schneland Energy နှင့် Schnelider Compressions